Torohevitra tsara indrindra hanoratana hafatra SMS mahomby | Martech Zone
Mahagaga ny valin'ny valiny sy ny fiovam-po amin'ny hafatra an-tsoratra amin'ny alàlan'ny fitaovana finday. Ary io no hany fampitaovana fandefasan-kafatra eran'izao rehetra izao satria ny sehatra hafa rehetra dia misy olana momba ny sivana sy ny fifanarahana. izany infographic avy amin'ny TextMarketer manondro singa fototra vitsivitsy amin'ny hafatra marketing SMS mahomby:
Atombohy amin'ny mpaka sary hampifandray ny mpamaky ary hamaky hatrany.
Aza mampiasa fanafohezana fandefasana hafatra - ny ankamaroan'ny mpampiasa finday dia tsy mahatakatra azy ireo.
Ataovy fohy izany - Ny lahatsoratra tokana dia litera 160 (na dia azonao atao aza ny mandefa hafatra an-tsoratra amin'ny lafiny maro).
Lazao azy ireo hoe iza ianao - Tsy fantatry ny mpanjifa hoe avy aiza ilay hafatra raha tsy ambaranao.
Lazao azy ireo izay hatao - Ny fiantsoana mahery vaika dia fanalahidin'ny fampitomboana ny fahombiazan'ny hafatrao.
Tags: Sary torohayhafatra findayfandefasan-kafatra findaySMShafatra smshafatra an-tsoratratextmarketer